Madaxweyne Siilanyo oo shaaciyey waqtiga doorashada Somaliland
Sept 10, 2015 (GO)- Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay xilliga saxda ah ee doorashooshinka madaxtooyada iyo golaha wakiiladu ka dhici doonaan deegaanadda Somaliland.
Siilanyo ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku cadeeyey in 28/3/2017 ay qabsoomi doonto doorashooyinkii madaxweynaha iyo golaha Wakiillada.
“Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Mudane. Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu digreeto Madaxweyne oo sumadeedu JSL/M/XERM/249-3569/092015 ku cadeeyey xilliga Waqtiga rasmiga ah ee dalka looga dareeridoono doorashada Madaxtooyada iyo wakiilada.
Wuxuu Soo Saaray; Xeerkan oo lagu go’aamiyey in taariikhdu markay tahay 28/03/2017 ay noqoto maalin doorasho oo ay qabsoonto Doorashada Madaxweynaha, Madaxweyne Ku-xigeenka iyo Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somalilan” ayaa lagu yidhi qoraal xafiiska madaxweynaha ka soo baxay oo uu ku saxeexnaa afhayeenka madaxweynaha Axmed Saleebaan Dhuxul.
Si kastaba ha ahaatee, guddida doorashooyinka ayaa madaxweynaha u soo gudbiya waqtiga ay doorashadda qabanayaaan ka dibna Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay waqtiga loo soo gudbiyey, waxaana xilligan hore u cayimay golaha guurtidda oo ku saleeyey wakhtigii ay muddadda u kordhiyeen madaxweynaha iyo golaha Wakiiladda.